Imishini Yezimboni - I-AOOD Technology Limited
Imishini yezimboni idlala indima enkulu ukufeza ukukhiqiza okuphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu nezindleko eziphansi. Kulezi zinhlelo eziyinkimbinkimbi zezimboni, imihlangano yama-slip ring namajoyini ajikelezayo asetshenziswa kakhulu ukwenza umsebenzi wokudlulisa amandla, idatha, isinali noma imidiya kusuka engxenyeni emile iye engxenyeni ejikelezayo. Ngokuya ngokuxakaniseka kohlelo, izindandatho ezishelelayo kanye namajoyini wokujikeleza angahlanganiswa.
I-AOOD inikeze amasistimu amaslip ring emishini yezimboni iminyaka. Ungathola ukuthi izindandatho ze-AOOD zenza umsebenzi wazo wokudlulisa ugesi nogesi ngemishini yokushisela, imishini yokukhetha nokubeka, imishini yokupakisha, amasistimu okuphatha izinto, izingalo zerobhothi, ama-semiconductors, izinsimbi zokufaka amabhodlela nezokugcwalisa, izixhobo zokulungisa ukudla, izixhobo zokuhlola amapayipi, ukuhlolwa okujikelezayo amatafula, ama-strain guages, imishini yokuphrinta neminye imishini emikhulu. Masikucacise ngamarobhothi, irobhothi liqukethe izingxenye ezimbili eziyinhloko, enye ingalo yerobhothi kanti enye ifreyimu eyisisekelo.
Ingalo eyirobhothi ingazungeza ngama-360 ° mahhala kepha ifreyimu eyisisekelo imisiwe futhi sidinga ukudlulisa amandla nezimpawu kusuka kuhlaka lwesisekelo kuya kuyunithi yokulawula ingalo ye-robotic. Lapha kufanele sisebenzise iringi eshelelayo ukuxazulula le nkinga ngaphandle kwenkinga yekhebula.
I-AOOD igcina njalo icwaninga futhi isungula izixazululo ezintsha zamaslip ring. Izindandatho ze-AOOD rolling-contacting and non-contact zingafinyelela ukudluliswa okuthembekile isikhathi eside ngaphansi kokusebenza kwejubane, amasongo e-mercury athinta amasongo angafezekisa ukudluliswa kwamanje okuphezulu kakhulu, njenge-AOOD 3000amp isixhumi esijikelezisa ugesi semishini yokushisela.
Imikhiqizo letihlobene: Ngama-Bore Slip Rings, Izindandatho zePancake Slip,Izindandatho zeServo System Slip